GỤỌ NKE American Sign Language Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga German Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Moore Ossetian Persian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian
‘Onye ihe na-agara nke ọma [ma ọ bụ, “onye obi ụtọ”] ka mmadụ ahụ bụ nke ihe ụtọ ya dị n’iwu Jehova.’—ABỤ ỌMA 1:1, 2.
1. N’ihi gịnị ka anyị ji nwee obi ụtọ dị ka ndị ohu Jehova?
JEHOVA na-akwado ma na-agọzi anyị dị ka ndị ohu ya na-eguzosi ike n’ihe. N’eziokwu, anyị na-eche ọtụtụ ọnwụnwa ihu. Otú ọ dị, anyị na-enwekwa ezi obi ụtọ. Nke a abụghị ihe ijuanya n’ihi na anyị na-ejere “Chineke onye obi ụtọ” ozi, mmụọ nsọ ya na-amịpụtakwa ọṅụ n’ime obi anyị. (1 Timoti 1:11; Ndị Galeshia 5:22) Ọṅụ bụ ezi obi ụtọ na-abịa site n’atụmanya ma ọ bụ nnweta nke ihe dị mma. Nna anyị nke eluigwe na-enyekwa anyị ezi onyinye n’ezie. (Jems 1:17) Ka a sịkwa ihe mere anyị ji nwee obi ụtọ!
2. Olee abụ ọma ndị anyị ga-atụle?
2 A kpọtụrụ obi ụtọ ma ọ bụ ihe ịga nke ọma aha ọtụtụ ugboro n’akwụkwọ Abụ Ọma. Dị ka ihe atụ, nke a bụ eziokwu banyere Abụ Ọma nke 1 na nke 2. Ụmụazụ Jizọs Kraịst n’oge mbụ kwuru na ọ bụ Eze Devid nke Izrel dere abụ ọma nke abụọ. (Ọrụ 4:25, 26) Onye rọrọ abụ ọma nke mbụ, bụ́ onye a na-akpọghị aha, ji okwu ndị a malite abụ ya nke o dere n’ike mmụọ nsọ: “Onye ihe na-agara nke ọma [ma ọ bụ, “onye obi ụtọ”] ka mmadụ ahụ bụ nke na-ejeghị ije na ndụmọdụ ndị na-emebi iwu.” (Abụ Ọma 1:1) Ka anyị hụ n’isiokwu a na na nke na-eso ya, otú Abụ Ọma nke 1 na nke 2 si agwa anyị ihe mere anyị ga-eji na-aṅụrị ọṅụ.
Isi Ihe Na-akpata Obi Ụtọ
3. Dị ka Abụ Ọma 1:1 si kwuo, gịnị bụ ụfọdụ ihe mere onye na-asọpụrụ Chineke ji enwe obi ụtọ?
3 Abụ Ọma nke 1 na-egosi ihe mere onye na-asọpụrụ Chineke ji enwe obi ụtọ. N’ikwu ihe mere e ji nwee obi ụtọ dị otú ahụ, ọbụ abụ ahụ bụrụ, sị: “Onye ihe na-agara nke ọma [ma ọ bụ, “onye obi ụtọ”] ka mmadụ ahụ bụ nke na-ejeghị ije na ndụmọdụ ndị na-emebi iwu, nke na-eguzoghịkwa n’ụzọ ndị mmehie, nke na-anọghịkwa n’ọnọdụ ndị na-akwa emo.”—Abụ Ọma 1:1.
4. Ụzọ ndụ dị aṅaa kwesịrị nṅomi ka Zekaraịa na Elizabet gbasoro?
4 Iji nwee obi ụtọ n’ezie, anyị aghaghị ime ihe kwekọrọ n’ụkpụrụ ezi omume Jehova. Zekaraịa na Elizabet, bụ́ ndị nwere ihe ùgwù na-enye ọṅụ nke ịghọ nne na nna Jọn Onye Na-eme Baptizim, “bụ ndị ezi omume n’ihu Chineke n’ihi ije ije n’ụzọ na-enweghị ụta n’ikwekọ n’ihe nile Jehova nyere n’iwu na ihe ndị ọ chọrọ n’iwu.” (Luk 1:5, 6) Anyị pụrụ inwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na anyị agbasoo ụzọ ndụ yiri nke ha ma jụwaa isi ‘ije ije na ndụmọdụ nke ndị na-emebi iwu’ ma ọ bụ jụ ịbụ ndị ndụmọdụ ha ndị na-ekwekọghị n’iwu Chineke na-eduzi.
5. Gịnị pụrụ inyere anyị aka izere ‘ụzọ ndị mmehie’?
5 Ọ bụrụ na anyị na-ajụ echiche ndị na-emebi iwu, anyị agaghị ‘na-eguzo n’ụzọ ndị mmehie.’ N’ezie, a gaghị ahụ anyị n’ụzọ nkịtị n’ebe ha na-anọkarị—n’ebe a na-eme ihe ntụrụndụ rụrụ arụ ma ọ bụ n’ebe ndị a na-enyo enyo. Gịnị ma ọ bụrụ na a nwaa anyị isonyere ndị mmehie n’omume ha nke Akwụkwọ Nsọ katọrọ? Mgbe ahụ, ka anyị kpee ekpere maka enyemaka Chineke iji mee ihe kwekọrọ n’okwu Pọl onyeozi: “Unu na ndị na-ekweghị ekwe ekekọtala onwe unu n’ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ. N’ihi na olee mkpakọrịta ezi omume na mmebi iwu nwere? Ma ọ bụ olee òkè ìhè na ọchịchịrị nwere?” (2 Ndị Kọrint 6:14) Ọ bụrụ na anyị adabere n’ebe Chineke nọ ma “dị ọcha n’obi,” anyị ga-ajụ mmụọ na ụzọ ndụ nke ndị mmehie, anyị ga-enwekwa ebumnobi na ọchịchọ dị ọcha, ya na ‘okwukwe na-enweghị ihu abụọ.’—Matiu 5:8; 1 Timoti 1:5.
6. N’ihi gịnị ka anyị ji kwesị ịnọ na nche banyere ndị na-akwa emo?
6 Iji mee ihe na-atọ Jehova ụtọ, anyị agaghị anwa anwa ‘nọrọ n’ọnọdụ ndị na-akwa emo.’ Ụfọdụ na-akwa nsọpụrụ Chineke n’onwe ya emo, ma ‘n’ụbọchị ikpeazụ’ ndị a, ndị bụ́bu Ndị Kraịst bụ́ ndị siworo n’ezi ofufe dapụ na-egosipụtakarị nlelị n’ịkwa emo ha. Pita onyeozi dọrọ ndị kwere ekwe ibe ya aka ná ntị, sị: “Ndị m hụrụ n’anya, . . . unu bu ụzọ mara nke a, na n’ụbọchị ikpeazụ, ndị na-akwa emo ga-eji ịkwa emo ha bịa, na-aga n’ihu dị ka ọchịchọ nke aka ha si dị ma na-asị: ‘Olee ebe nkwa a nke ọnụnọ ya dị? Leenụ, site n’ụbọchị nna nna anyị ha dara n’ụra ọnwụ, ihe nile na-adịgide kpọmkwem dị ka hà dị site ná mmalite nke ihe e kere eke.’” (2 Pita 3:1-4) Ọ bụrụ na ‘anyị anọdụghị ma ọlị n’ọnọdụ ndị na-akwa emo,’ anyị ga-ezere ọdachi nke na-aghaghị ịdakwasị ha.—Ilu 1:22-27.
7. N’ihi gịnị ka anyị ji kwesị iburu okwu ndị dị n’Abụ Ọma 1:1 n’uche?
7 Ọ gwụla ma anyị buuru okwu mmalite nke Abụ Ọma nke 1 n’uche, anyị pụrụ ịtụfu ọnọdụ ime mmụọ anyị nwetaworo site n’ịmụ Akwụkwọ Nsọ. N’ezie, ọnọdụ anyị pụziri ịka njọ. Anyị pụrụ ịmalite ịdaghachi azụ ma ọ bụrụ na anyị agbasoo ndụmọdụ ndị na-emebi iwu. Mgbe ahụ, anyị pụrụ iso ha na-akpachi anya. Ka oge na-aga, anyị pụrụ ịghọ ndị na-enweghị okwukwe si n’ezi ofufe dapụ bụ́ ndị na-akwa emo. N’ụzọ doro anya, ime ndị na-emebi iwu enyi pụrụ iwulite n’ime anyị mmụọ nke asọpụrụghị Chineke, ọ pụkwara ibibi mmekọrịta anyị na Jehova Chineke. (1 Ndị Kọrint 15:33; Jems 4:4) Ka anyị ghara ikwe ka nke ahụ mee anyị ma ọlị!
8. Gịnị ga-enyere anyị aka ime ka uche anyị dịgide n’ihe ime mmụọ?
8 Ekpere ga-enyere anyị aka itinye uche anyị n’ihe ime mmụọ na izere iso ndị na-emebi iwu na-akpakọrịta. “Unu enwela nchegbu banyere ihe ọ bụla,” ka Pọl dere, “kama n’ihe nile site n’ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike ya na inye ekele, meenụ ka Chineke mara ihe unu na-arịọ; udo nke Chineke nke karịrị echiche nile ga-echekwa obi unu na ike iche echiche unu nche site na Kraịst Jizọs.” Onyeozi ahụ gbara ume ka anyị na-atụle ihe ndị bụ́ eziokwu, ihe ndị kwesịrị nchebara echiche, ihe ndị bụ́ ezi omume, ihe ndị dị ọcha, ihe ndị na-akpali ịhụnanya, ihe ndị a na-ekwu okwu ọma banyere ha, omume ọma, na ihe kwesịrị otuto. (Ndị Filipaị 4:6-8) Ka anyị mee ihe kwekọrọ na ndụmọdụ Pọl ma ghara ma ọlị ịdị ka ndị na-emebi iwu.
9. Ọ bụ ezie na anyị na-ezere mmebi iwu, olee otú anyị si agbalị inyere ụdị mmadụ nile aka?
9 Ọ bụ ezie na anyị na-ajụ mmebi iwu, anyị na-eji nkà agbara ndị ọzọ àmà, ọbụna dị ka Pọl onyeozi gwara Gọvanọ Filiks nke Rom “banyere ezi omume na njide onwe onye na ikpe nke na-abịanụ.” (Ọrụ 24:24, 25; Ndị Kọlọsi 4:6) Anyị na-ekwusara ụdị mmadụ nile ozi ọma nke Alaeze ahụ, anyị na-emesokwa ha ihe n’ụzọ obiọma. Anyị nwere obi ike na “ndị nwere ezi ọchịchọ obi maka ndụ ebighị ebi” ga-aghọ ndị kwere ekwe ma bụrụ ndị iwu Chineke na-atọ ụtọ.—Ọrụ 13:48.
Iwu Jehova Na-atọ Ya Ụtọ
10. Gịnị ga-enye aka mee ka ihe anyị na-amụ dịgide n’uche na n’obi anyị n’oge ọmụmụ ihe onwe onye?
10 Banyere onye nwere obi ụtọ, ọbụ abụ ahụ gara n’ihu ikwu, sị: “N’iwu Jehova ka ihe ụtọ ya dị; ọ bụkwa n’iwu Ya ka ọ na-atụgharị uche ehihie na abalị.” (Abụ Ọma 1:2) Dị ka ndị ohu Chineke, ‘iwu Jehova na-atọ anyị ụtọ.’ Mgbe o kwere omume, n’oge ọmụmụ ihe onwe onye na mgbe anyị na-atụgharị uche, anyị pụrụ ‘ịtụgharị uche n’ihe anyị na-agụ,’ na-agụpụta ya agụpụta. Ime nke a mgbe anyị na-agụ akụkụ ọ bụla nke Akwụkwọ Nsọ ga-enye aka ime ka ọ dịgide n’uche na n’obi anyị.
11. N’ihi gịnị ka anyị ji kwesị ịdị na-agụ Bible “ehihie na abalị”?
11 “Ohu ahụ na-ekwesị ntụkwasị obi, nke nwekwara uche” agbawo anyị ume ịgụ Bible kwa ụbọchị. (Matiu 24:45) N’ihi ọchịchọ siri ike anyị nwere ịghọta ozi Jehova maka ihe a kpọrọ mmadụ nke ọma karị, anyị pụrụ ịdị na-agụ Bible “ehihie na abalị”—ee, ọbụna mgbe anyị na-enweghị ike ihi ụra n’ihi ihe ụfọdụ. Pita gbara anyị ume, sị: “Dịkwa ka ụmụ a mụrụ ọhụrụ, zụlitenụ agụụ maka mmiri ara a na-agwagbughị agwagbu nke dịịrị okwu ahụ, ka unu wee site na ya toruo nzọpụta.” (1 Pita 2:1, 2) Ọ̀ na-atọ gị ụtọ ịgụ Bible kwa ụbọchị na ịtụgharị uche n’Okwu Chineke na nzube ya n’abalị? Ọ tọrọ ọbụ abụ ahụ ụtọ.—Abụ Ọma 63:6.
12. Gịnị ka anyị ga-eme ma ọ bụrụ na iwu Jehova na-atọ anyị ụtọ?
12 Obi ụtọ ebighị ebi anyị dabeere n’iwu Chineke ịtọ anyị ụtọ. O zuru okè ma zie ezie, a na-enwetakwa ọkpụkpụ ọrụ hiri nne n’idebe ya. (Abụ Ọma 19:7-11) Jems onye na-eso ụzọ dere, sị: “Onye na-enyonye anya n’iwu ahụ zuru okè nke dịịrị nnwere onwe, onye na-anọgidekwa na ya, onye a, n’ihi na ọ ghọwo, ọ bụghị onye na-echefu ihe ọ nụrụ, kama onye na-arụ ọrụ ahụ, ga-enwe obi ụtọ na ọ na-arụ ya.” (Jems 1:25) Ọ bụrụ na iwu Jehova na-atọ anyị ụtọ n’ezie, otu ụbọchị agaghị agafe ka anyị ghara ịtụle ihe ime mmụọ. N’ezie, a ga-akpali anyị ‘inyocha ihe ndị miri emi nke Chineke’ na idebe ihe ndị metụtara Alaeze ahụ n’ọnọdụ mbụ ná ndụ.—1 Ndị Kọrint 2:10-13; Matiu 6:33.
Ọ Na-adị Ka Osisi
13-15. N’echiche dị aṅaa ka anyị pụrụ ịdị ka osisi a kụrụ n’akụkụ isi iyi mmiri jupụtara?
13 N’ịga n’ihu n’ịkọwa onye ezi omume, ọbụ abụ ahụ na-ekwu, sị: “Ọ ga-adịkwa ka osisi a kụworo n’akụkụ iyi jupụtara na mmiri, nke na-amị mkpụrụ ya na mgbe ya, ọzọ, akwụkwọ ya adịghị akpọnwụ; ihe ọ bụlakwa nke ọ na-eme, ọ na-eme ka ọ gaa nke ọma.” (Abụ Ọma 1:3) Dị ka ndị ọzọ nile na-ezughị okè, anyị bụ́ ndị na-ejere Jehova ozi na-enwe ihe isi ike ná ndụ. (Job 14:1) Anyị pụrụ inweta mkpagbu na ọnwụnwa ndị ọzọ dịgasị iche bụ́ ndị metụtara okwukwe anyị. (Matiu 5:10-12) Otú ọ dị, site n’enyemaka Chineke, anyị nwere ike idi ule ndị a n’ụzọ gara nke ọma, dị nnọọ ka osisi ahụ́ dị mma na-alanarị ifufe na-efesi nnọọ ike.
14 Osisi a kụrụ n’akụkụ isi iyi na-adịghị ata ata adịghị akpọnwụ n’oge okpomọkụ ma ọ bụ n’oge oké ọkọchị. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-atụ egwu Chineke, ume anyị na-abịa site n’Isi Iyi na-adịghị ata ata—Jehova Chineke. Pọl legaara Chineke anya maka enyemaka ma nwee ike ikwu, sị: “Maka ihe nile enwere m ume site n’onye ahụ [Jehova] nke na-enye m ike.” (Ndị Filipaị 4:13) Mgbe mmụọ nsọ Jehova na-edu ma na-akwagide anyị n’ụzọ ime mmụọ, anyị adịghị akpọnwụ, na-aghọ ndị na-adịghị amị mkpụrụ ma ọ bụ ndị nwụrụ anwụ n’ụzọ ime mmụọ. Anyị na-amị mkpụrụ n’ozi Chineke ma na-egosipụta mkpụrụ nke mmụọ nsọ ya.—Jeremaịa 17:7, 8; Ndị Galeshia 5:22, 23.
15 Site n’iji ụdị okwu Hibru a sụgharịrị ịbụ “dị ka” mee ihe, ọbụ abụ ahụ ji ihe ya na ihe yiri na-eme ihe. O ji ihe abụọ dị iche na-atụnyere ibe ha, ọ bụ ezie na ọ dị otu ụzọ ha si yie. Ụmụ mmadụ na osisi dị iche ma o doro anya na ịma mma nke osisi a kụrụ n’akụkụ isi iyi mmiri jupụtara na-echetara ọbụ abụ ahụ ọganihu ime mmụọ nke ndị ‘iwu Jehova na-atọ ụtọ.’ Ọ bụrụ na iwu Chineke na-atọ anyị ụtọ, ụbọchị anyị pụrụ ịdị ka nke osisi. N’ezie, anyị pụrụ ịdị ndụ ebighị ebi.—Jọn 17:3.
16. N’ihi gịnị, ọ̀ bụkwa n’ụzọ dị aṅaa ka ‘ihe ọ bụla anyị na-eme na-aga nke ọma’?
16 Ka anyị na-agbaso ụzọ ndụ ziri ezi, Jehova na-enyere anyị aka ịnagide nrụgide nke ọnwụnwa na ihe isi ike dị iche iche. Anyị na-enwe ọṅụ ma na-amị mkpụrụ n’ozi Chineke. (Matiu 13:23; Luk 8:15) ‘Ihe nile anyị na-eme na-aga nke ọma’ n’ihi na ebumnobi anyị bụ́ isi bụ ime uche Jehova. Ebe ọ bụ na nzube ya na-emezu mgbe nile, ya ana-atọkwa anyị ụtọ idebe iwu ya, anyị na-enwe ọganihu n’ụzọ ime mmụọ. (Jenesis 39:23; Joshua 1:7, 8; Aịsaịa 55:11) Nke a bụ eziokwu ọbụna mgbe anyị na-eche ihe isi ike ihu.—Abụ Ọma 112:1-3; 3 Jọn 2.
Ndị Na-emebi Iwu Na-eyi Ka Hà Na-enwe Ihe Ịga nke Ọma
17, 18. (a) Gịnị ka ọbụ abụ ahụ ji tụnyere ndị na-emebi iwu? (b) Ya bụrụgodị na ndị na-emebi iwu enwee ọganihu n’ụzọ ihe onwunwe, n’ihi gịnị ka ha na-ejighị nwee nchebe na-adịgide adịgide?
17 Lee ka ọnọdụ ndị na-emebi iwu si dị nnọọ iche na nke ndị ezi omume! Ndị na-emebi iwu pụrụ iyi ka hà na-enwe ihe ịga nke ọma ruo oge ụfọdụ, ma ha adịghị enwe ihe ịga nke ọma n’ụzọ ime mmụọ. Nke a pụtara ìhè n’okwu ọzọ nke ọbụ abụ ahụ: “Ọ bụghị otú a ka ndị na-emebi iwu dị; kama ha dị ka igbogbo ọka nke ifufe na-efesa. N’ihi nke a ndị na-emebi iwu agaghị eguzosi ike n’ikpe, ndị mmehie agaghị eguzosikwa ike ná nzukọ ndị ezi omume.” (Abụ Ọma 1:4, 5) Rịba ama na ọbụ abụ ahụ kwuru, sị, “ọ bụghị otú a ka ndị na-emebi iwu dị.” Ihe o bu n’uche bụ na ha adịghị ka ndị na-asọpụrụ Chineke, bụ́ ndị a ka ji tụnyere osisi na-amị mkpụrụ bụ́ nke na-adịgide adịgide.
18 Ya bụrụgodị na ndị na-emebi iwu enwee ihe ịga nke ọma n’ụzọ ihe onwunwe, ha enweghị nchebe na-adịgide adịgide. (Abụ Ọma 37:16; 73:3, 12) Ha dị ka nwoke ahụ bara ọgaranya na-enweghị ezi uche nke Jizọs kpọtụrụ aha n’ilu ya mgbe a gwara ya ka o kpee ikpe n’okwu metụtara ihe nketa. Jizọs gwara ndị nọ n’ebe ahụ, sị: “Ghewenụ anya unu oghe, na-echekwanụ nche megide ụdị ọchịchọ anyaukwu ọ bụla, n’ihi na ọbụna mgbe mmadụ nwere ihe n’ụba, ndụ ya adịghị esi n’ihe ndị o nwere apụta.” Jizọs mere ihe atụ nke a site n’ikwu na ala otu ọgaranya mere ihe nke ọma nke na o mere atụmatụ ịkwatu ọba ya ma wuo ndị nke ka ibu bụ́ ndị ga-aba ezi ihe ya nile. Nwoke ahụ meziri atụmatụ iri ihe, ịṅụ ihe, na ime onwe ya obi ụtọ. Ma Chineke sịrị: “Onye na-enweghị ezi uche, n’abalị a ka ha na-achọ mkpụrụ obi gị n’aka gị. Ònye ga-enwezi ihe ndị ị kwakọbara?” Iji mesie ihe ọ na-ekwu ike, Jizọs gbakwụnyere, sị: “Otú ahụ ka ọ ga-adịrị onye na-akpakọbara onwe ya akụ̀ ma ghara ịbụ ọgaranya n’ebe Chineke nọ.”—Luk 12:13-21.
19, 20. (a) Kọwaa usoro nzọcha na mfụcha ọka nke oge ochie. (b) N’ihi gịnị ka e ji jiri ndị na-emebi iwu tụnyere igbogbo?
19 Ndị na-emebi iwu abụghị “ọgaranya n’ebe Chineke nọ.” N’ihi ya, ha enweghị nchebe na nkwụsi ike karịa igbogbo, bụ́ obere ihe nke na-ekpuchi ọka. Mgbe e gbutesịrị ọka n’oge ochie, a na-ewega ya n’ebe nzọcha ọka, ebe dị larịị nke na-adịkarị n’elu mkputamkpu. N’ebe ahụ, a na-eji ihe mkpọre nwere nkume dị nkọ ma ọ bụ ezé ígwè n’akụkụ ya nke anụmanụ na-adọkpụ, agba n’elu ọka ahụ iji gwerie okporo ha ma mee ka ọka ndị ahụ pụta. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-eji shọvel e ji afụcha ọka ekuli ha nile elu n’ikuku. (Aịsaịa 30:24) Ọka ndị ahụ na-adaghachi n’ala ebe nzọcha ọka ebe ikuku na-ebuga okporo ọka n’akụkụ ma bufuo igbogbo ọka. (Rut 3:2) Mgbe e ji myọ yọchasịa ọka ahụ iji wepụ ajịrịja na ihe ndị yiri ha, a na-akwakọbazi ha n’ọba ma ọ bụ gwerie ha. (Luk 22:31) Ma ikuku ebufuola igbogbo ha.
20 Dị nnọọ ka a na-echekwa ọka ndị dara n’ala ebe ikuku na-ebufu igbogbo ha, otú ahụ ka ndị ezi omume ga-anọgide, a ga-ewepụkwa ndị na-emebi iwu. N’ezie, obi dị anyị ụtọ na n’isi nso, ndị dị otú ahụ na-emebi iwu ga-apụ n’anya ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe ha pụrụ n’anya, a ga-agọzi ndị iwu Jehova na-atọ ụtọ n’ụzọ dị ukwuu. N’ezie, ụmụ mmadụ na-erube isi ga-emesị nweta onyinye Chineke nke bụ́ ndụ ebighị ebi.—Matiu 25:34-46; Ndị Rom 6:23.
‘Ụzọ A Gọziri Agọzi nke Ndị Ezi Omume’
21. Olee otú o si bụrụ na Jehova “maara ụzọ ndị ezi omume”?
21 Abụ ọma nke mbụ ji okwu ndị a mechie: “Jehova maara ụzọ ndị ezi omume: ma ụzọ ndị na-emebi iwu ga-ala n’iyi.” (Abụ Ọma 1:6) Olee otú o si bụrụ na Chineke “maara ụzọ ndị ezi omume”? Ọ bụrụ na anyị na-ebi ndụ ziri ezi, anyị pụrụ ijide n’aka na Nna anyị nke eluigwe na-ahụ ndụ nsọpụrụ Chineke anyị na-ebi ma na-ele anyị anya dị ka ndị ohu ya a nwapụtara anwapụta. Anyị onwe anyị pụziri, kwesịkwa ịtụkwasị ya nchegbu anyị nile, na-enwe obi ike na ọ na-eche banyere anyị n’ezie.—Ezikiel 34:11; 1 Pita 5:6, 7.
22, 23. Gịnị ga-eme ndị na-emebi iwu na ndị ezi omume?
22 “Ụzọ ndị ezi omume” ga-adịru mgbe ebighị ebi, ma ndị na-emebi iwu na-enweghị nchegharị ga-ala n’iyi n’ihi ọmụma ikpe Jehova. “Ụzọ” ha kwa, ma ọ bụ ụzọ ndụ ha, ga-eso ha laa n’iyi. Anyị pụrụ inwe obi ike ná mmezu nke okwu Devid bụ́: “Ma ọ fọdụrụ nwa mgbe, onye na-emebi iwu agaghị adịkwa: ị ga-elekwasịkwa ọnọdụ ya anya, ma ọ gaghị anọ. Ma ndị dị umeala n’obi ga-enweta ala; ịba ụba nke udo ga-atọkwa ha ụtọ. Ndị ezi omume ga-enweta ala, birikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 37:10, 11, 29.
23 Lee obi ụtọ anyị ga-enwe ma ọ bụrụ na anyị nwere ihe ùgwù nke ibi na paradaịs elu ala mgbe ndị na-emebi iwu na-agaghịzi adị! Ndị dị umeala n’obi na ndị ezi omume ga-enwe ezi udo n’ihi na ‘iwu Jehova’ ga na-atọ ha ụtọ mgbe nile. Otú ọ dị, tupu mgbe ahụ, “ụkpụrụ Jehova” aghaghị imezu. (Abụ Ọma 2:7a) Isiokwu na-esonụ ga-enyere anyị aka ịhụ ihe ụkpụrụ ahụ bụ na ihe ọ ga-apụtara anyị na ezinụlọ dum nke mmadụ.
• N’ihi gịnị ka onye na-asọpụrụ Chineke ji enwe obi ụtọ?
• Gịnị na-egosi na iwu Jehova na-atọ anyị ụtọ?
• N’ụzọ dị aṅaa ka mmadụ pụrụ isi dị ka osisi a na-agba mmiri nke ọma?
• Olee otú ụzọ onye ezi omume si dị iche na nke onye na-emebi iwu?
[Foto dị na peeji nke 11]
Ekpere ga-enyere anyị aka izere iso ndị na-emebi iwu na-akpakọrịta
N’ihi gịnị ka onye ezi omume ji dị ka osisi?